Thu, Jun 4, 2020 at 8:40pm
जान्नुहाेस् ! फेसबुकले मृत व्यक्तिकाे अकाउन्टलालाई के गर्छ ?
काठमाडाैं, १७ असार। साकमाजिक सञ्जालहरू मध्ये फेसबुक सबैभन्दा बढी प्रयाेगमा आएकाे सञ्चारकाे माध्यम हाे। फेसबुकमा जोडिने मानिसहरुको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । आफ्ना बिचार, तस्बिर तथा भिडियोहरु आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा पोस्ट गर्न तथा शेयर गर्ने काम हरेक मानिसले गरिरहेका हुन्छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा अर्को तर्फ अर्काेतिर मृत्यु भएका प्रयाेगकर्ताहरूकाे अकाउण्टको संख्या पनि बढिरहेको छ । मृत्यु भइसकेका प्रयोगकर्ताको फेसबुक अकाउण्टलाई फेसबुकले..
के अब विषदीबाट मुक्ति पाइएला ? ८ भन्सार विन्दुमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला
काठमाडौँ, १७ असार । भारत र चीनसँग व्यापारिक कारोबार हुने आठ भन्सार विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भारत र चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको भन्सार विन्दुमै वैज्ञानिक परीक्षण गर्न यस्तो प्रयोगशाला निर्माण..
काठमाडौँ, १७ असार । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सके आउँदो पाँच वर्षभित्र ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलीका अनुसार सरकारका हरेक संरचनालाई अटोमेसनमा लैजान सके सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने बताए। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख..
हुम्लामा १ सातादेखि टेलिफोन सेवा बन्द
हुम्ला, १६ असार दक्षिण क्षेत्रमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ । असार पहिलो हप्ता चङ्खेली गाउँपालिका–३ मेल्छाममा रहेको टेलिफोन टावरमा समस्या आउँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । टेलिफोन सेवा पुनः सञ्चालन नहुँदा मेल्छाम, दार्मा, सर्केगाडलगायतका बासिन्दा सञ्चारबाट विच्छेद भएका छन् । टेलिफोन गर्नका लागि दुई घण्टाको पैदल हिँडेर अर्को गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका..
‘डिजिटल नेपाल : लाखौँ रोजगारी सिर्जनाको आधार’
काठमाडौँ, १६ असार सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा एकैसाथ लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रविधि क्षेत्रका जानकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम कानूनलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गतको ‘सूचना प्रविधि र रोजगार’ विषयको छलफलमा सहभागी वक्ताले सरकारको सानो नीतिगत निर्णयका आधारमै मात्र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने जिकिर गरे । उनीहरुले डिजिटल नेपाल..
ओप्पो प्रयाेगकर्तालाई खुशीकाे खबर, अब सिम र वाइफाईबीना नै कल गर्न मिल्ने
काठमाडौं, १६ असार। ओप्पो माेबाइल प्रयाेगकर्तालाई चाइनिज कम्पनी अप्पोले नयाँ सुविधा दिने भएकाे छ। अप्पोले सिम र वाइफाईकाे प्रयाेगबीना नै कल गर्न मिल्ने नयाँ प्रविधि ल्याउने भएको हाे। यस प्रविधिबाट वाइफाई, ब्लुतुथ र सिमको सेलुलर कनेक्सन बिना नै एक प्रयोगकर्ताले अर्को प्रयोगकर्तासँग कुराकानी गर्न सक्नेछन् । यस प्रविधिलाई अप्पोले मेसटक नाम दिएको छ ।मेसटकको प्रयोगबाट अप्पो स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने एक प्रयोगकर्ताले अप्पो स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने..
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ आकांक्षी, आचार्य र खनाल अध्यक्ष बन्ने लबिङ्मा
काठमाडौँ, असार १६ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नेको होड चलिरहँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमै लामो अनुभव बटुलिसकेका प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पूरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद अचार्य आ आफ्नो लविङ्का लागि व्यस्त हुन थालेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी संभावना बोकेका आंकाँक्षीकारुपमा समेत यी दुई पात्रको चर्चा चुलिएको हो । दुवै आकाँक्षीले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागी यो पटक सहित..
नासाकाे शनि ग्रहको चन्द्र टाइटनमा हेलिकप्टर उडाउने 'मिसन'
वासिङ्टन, १५ असार । राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासन नासाले शनि ग्रहको चन्द्र टाइटनमा ड्रोन हेलिकप्टर पुर्याउने भएको छ। नासाले सन् २०३४ सम्ममा ड्रोन हेलिकप्टर अभियान अन्तर्गत आफ्नो हेलिकप्टर टाइटनमा पुर्याउने उद्देश्य राखेको हो। यस अभियानका लागि नासाले १ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ भने ८ वटा ड्रोन हेलिकप्टर शनि ग्रहको चन्द्रमाका लागि लञ्च गर्नेछ। सन् २०२६ बाट पृथ्वी छाड्ने उक्त हेलिकप्टर सन्..
टिकटकले दुर्घटना निम्त्याउँदै, भिडियाे बनाउन जिमन्यास्टिक हान्दा एक युवककाे मृत्यु
काठमाडाैं, १४ असार । टिकटक पछिल्लाे समय युवा पुस्तामा निकै लाेकप्रिय बन्दै गएकाे छ। यहिले युवा पुस्ता आफ्नाे बढि जस्ताे समय टिकटकमा विताउने गरेका छन्। टिकटक एप विश्वमै चर्चित मनोरन्जनात्मक एप हो। यस एपमार्फत् मानिसहरु नृत्य, गायन लगायतका विभिन्न विधामा नक्कल गर्न सक्छन्। कलात्मक र मनोरन्जनात्मक भएका हुनाले मानिसहरु यस्ता भिडियो बनाउन रुचाउँछन्। तर केही समययता टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा मानिसहरुको ज्यान जाने..
आईपोड र आईम्याकका परिकल्पनाकार जोनी आइभले छाेडे एप्पल कम्पनी
एजेन्सी, १४ असार । एप्पलका प्रमूख डिजाइन अधिकृत जोनी आइभले एप्पल कम्पनी छाेडेका छन्। झण्डै ३० वर्ष एप्पलमा काम गरेका जाेनीले नयाँ व्यसाय शुरू गर्ने भन्दै कम्पनी छाेडेका हुन्। एप्पललाई चर्चित बनाउने आईफोन, आईपोड र आईम्याकका कल्पनाकार आइभले लभफ्रम नामक व्यवसाय शुरू गर्ने र त्यसको पहिलो ग्राहक एप्पल हुने बीबीसीले जनाएकाे छ। उनी एप्पलमा सन् १९९२ देखि एप्पलमा काम गर्दै आएका थिए। आइभ एप्पल कर्मचारी..
आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सिसीटिभी क्यामरा जडान
बैतडी, १३ असार । आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बैतडीको पाटन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । बजार क्षेत्रका मुख्यमुख्य स्थानमा ११ वटा सिसी क्यामरा जडान गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यबहादुर सिंहले बताउनुभयो । करीब रु पाँच लाखको लागतमा उक्त सिसीटिभी क्यामरा जडान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सिसीटिभी क्यामेरा जडानबाट शान्ति सुरक्षामा सहज हुने, अपराध न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने..
‘क्लिन फीड’ लागू गरेरै छाड्ने सरकारको दृढता
काठमाडौँ, १२ असार सरकारले ‘क्लिन फीड’ नीति लागू गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । टेलिभिजन सेवा प्रदायकले क्लिन फीड नीति लागू गर्न लागेको भन्दै टेलिभिजन प्रसारण नै बन्द गरिरहेको बेला सरकारले उक्त नीति लागू गराउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारेको हो । प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित ‘विज्ञापन ऐन २०७६’ को केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले टेलिभिजन प्रसारण..
१० वर्षभित्र २ करोडको रोजगारी खोस्दै रोबोट, अहिलेसम्म १७ लाख रोजगारी खोसियो
कठमाडौं, १२ चैत । प्रविधिको विकाससँगै मानिसको काम गर्ने शैलीमा निकै सहजता आएको छ । मानिसले गर्ने हरेक काम रोबाेटले कम समयमै सम्पन्न गर्दछ । यसले मानिसलाई विलासी जिवन दिन सहयोग गरेको छ। तर, केही दिन अगाडि मात्रै अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले रोबोटकै कारणले सन् २०३० सम्ममा २ करोड मानिसको रोजगारी गुम्न सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।अध्यायनपछिको उक्त रिपोर्टमा प्रत्येक एक रोबोर्टले औषत १.६..
अब समाचार वाचन पनि मोबाइल एपले गर्ने
काठमाडौं, ११ असार । पछिललो समय प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । जसको उदाहरणका रुपमा अब मोबाइल एपले नै समाचार वाचन गरिदिने भएको छ । नेपालका उत्कृष्ट अनलाइन समाचार पोर्टलका समाचार एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने टाइम्स अफ नेपाल मोबाइल एपमा नयाँ एआई सुविधा थपिएको हो। जसमा टाइम्स अफ नेपाल मोबाइल एपले नै समाचार आफै बाचन गरिदिने छ। यो सुविधा अहिलेलाई एन्ड्रोइड..
सात महिना बितिसक्दा पनि अगाडि बढेन फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया
काठमाडौ, असार ११ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडी बढाएको सात महिना बितिसक्दा पनि फ्रिक्वन्सी अक्सन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बोलकबोल मार्फत फ्रिक्वेन्सी बेच्न तयार गरेको प्रक्रिया पुस पहिलो साता बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, पुनः अक्सन प्रक्रियामा भागलिन आवेदन दिएका सेवाप्रदायको विभिन्न शिर्षकको कर र बक्यौता नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपार्ने भएपछि लिलामी प्रक्रिया अन्योलमा छ । सेवाप्रदायकले यहि..
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ जनाको आवेदन, कस्ले मार्ला बाजी ?
असार ११, काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि एक दर्जनको आवेदन परेको छ । अहिले दिगम्बर झाले राजिनामा दिएपछि कार्यवहाक अध्यक्षको रुपमा बरिष्ठ निर्देशक पूरुषोतम खनालले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सचिब महेन्द्रमान गुरुङ्को संयजकत्वमा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष पदका लागि ईच्छुकहरुमा हालका कार्यबाहक अध्यक्ष..
एमडिएमएस लागि छनोटमा परेको मेलेशियन कम्पनी आउट
असार ११, काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि छनोटमा परेको मलेशियन जोइन्ट भन्चर कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अयोग्य ठहर गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट(एमडिएमएस) संचालनको लागि टेण्डरमा अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई कम्पनीमध्ये एक मोबिलन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोल्यूशन प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर थिए । यी दुबै कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले आउट गरेको छ..
काठमाडौँ, १० असार नेपाल पत्रकार महासङ्घले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा ‘क्लिन फिड’ को व्यवस्था गरेकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको आमसञ्चार नीति र पत्रकार महासङ्घले विभिन्न चरणमा अघि सारेको मागपत्र तथा पारित दस्तावेजहरुमा ‘क्लिन फिड’ व्यवस्था लागू गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ । ‘क्लिन फिड’ ले नेपाली..
'क्लीन फिड' नीतिले हंगामा ! टेलिभिजन प्रशारण बन्द, व्यवसायीहरु भन्छन् - सरकारलाई दबाब दिएका हौं
काठमाडौं, असार ९ नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले सरकारले क्लीन फिड नीति लागु गर्ने भनेर डिजिटल टेलिभिजन व्यवसाय नै डुबाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ । टिभी सेवाप्रदायकसँग सरकारले समन्वय नै नगरी र बिना गहन अध्ययन बिज्ञापन रहित च्यानल सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउन सरकार अघि बढेको महासंघले जनाएको छ । बिना तयारी सरकारले ल्याउन लागेको क्लीन फिड नीति यसै अवस्थामा लागू हुँदा त्यसबाट अर्बोंको..
काठमाडौँ, ९ असार पछिल्लोपटक भएको एक नयाँ अनुसन्धान अनुसार मानिसको खप्परको पछिल्लो हिस्सामा सिङजस्तो हड्डी पलाइरहेको छ भने मानिसको पाखुराका हड्डी पनि कमजोर हुँदै गएका छन् । मानव शरीरका हड्डीमा भैरहेको यस्तो परिवर्तन अनौठो छ । हरेक मानिसको शरीरको ढाँचा उसको डिएनएअनुसार तयार हुन्छ । तर जीवन जिउने तरिकाको आधारमा त्यसमा परिवर्तन पनि आउँदछ । शोधकर्ताहरुले हड्डीको वायोग्राफीलाई अस्टियो वायोग्राफी भन्दछन् । त्यसमा..
डिजिटल पेमेन्ट सेवाप्रदायकमा अब्बल बन्दै ई–सेवा
काठमाडौं, ७ असार । डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक मध्य ई–सेवा नेपालमा एक अब्बल कम्पनी बन्दै गएको छ । ईसेवाले क्यासलेस प्रविधिलाई नेपालमा विकास गर्दै मानिसको दैनिकीलाई डिजिटल वालेट प्रणालीमा लैजादै छ । हाल नेपालमा ई सेवा सञ्चालनमा आएको लगभग १० बर्षमा ७५ लाख बढी मानिसको पहूँचमा ई–सेवाको पहुँच पुगेको छ । इसेवाले हाल मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको..
राष्ट्रपतिले प्रयोग नगरेपनि चीनले थाल्यो ट्विप्लोमेसी
काठमाडौँ, ७ असार । ट्विटरलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ट्विटरमा नभएर के भयो र ? उनका राजदूतहरू देश हेरी ट्विटरमार्फत कूटनीतिक अभ्यास गर्न थाल्दै छन् । नेपालमा रहेकी उनकी प्रतिनिधिले शुक्रबार त्यसकै श्रीगणेश गरिन् । राजदूत होउ याङचीले ट्विटर एकाउन्ट खोलेको जानकारी सार्वजनिक गर्न दूतावासले संवाददाताहरूलाई इमेल गर्‍यो । ‘दक्षिण एसियाको विकास र समृद्धिका लागि बेल्ट एन्ड..
के तपाईँलाई युट्यूबका यी ७ गोप्य ट्रिक्सहरु थाहा छ ?
एजेन्सी, ६ असार इन्टरनेटमा भिडियो शेयरका लागि युट्यूब सबैभन्दा उपर्युक्त विकल्पको रुपमा युट्यूब रहेको छ । त्यसैले पनि युट्यूबको प्रयोग दिनप्रतिदित बढिरहेको छ । कम्यप्युटरमा मात्रै नभएर मोबाइल, ट्याबलेट लगायतमा पनि युट्युब भिडियो हेर्ने गरिन्छ । आज हामीले युट्युबको प्रयोगलाई निकै सहयोग पुर्याउने ‘सर्टकट की’हरुको बारेमा जानकारी दिँदैछौं । भिडियोलाई ‘पज’ केही बेरका लागि रोक्नुपर्यो भने ‘K’ थिच्नुस् । यदि एक्कासी युट्यूब भिडियोको साउण्ड..
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कयौँ चिजहरु स्क्रिन सर्ट गरेर ल्याएको छु : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ, ६ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पत्रकारिता क्षेत्रका लागि नभई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा उहाँले नेपाली समाजलाई बढी स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने दृष्टिकोणबाटै विधेयकका विषय अगाडि सारिएकाले स्वतन्त्रतारहित समाज..
जुन २१ तारिख ! नेपालमा आज १४ घण्टा सुर्य देख्न पाइने, यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
काठमाडौं, ६ असार जुन २१ तारिखको शुक्रबार दिन लामो र रात छुटो हुनेछ । नेपालमा सूर्योदय र सूर्यास्तको बीचको समयअनुसार शुक्रबारको दिन झण्डै १४ घण्टाको हुनेछ । शुक्रबार काठमाडौंमा विहान ५ बजेर ९ मिनेटमा उदाएको घाम बेलुकी ७ बजेर ३ मिनेटमा अस्ताउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । शनीदेखि भने दिन छोटो र रात लामो हुनेछ । शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमा गर्मी..
काठमाडौँ, ५ असार । अति संवेदनशील मानिने पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको भट्टी निर्माण वा सञ्चालनको अनुमतिमा सचेत नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ । पारमाणिक क्षेत्रमा नेपाल कमजोर मुलुक भएकाले शक्ति केन्द्रले नाजायज फाइदा उठाउनेतर्फ ध्यान नदिइए गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बहस संसद्मा पुगेको छ । मुलुकमै पहिलो पटक ल्याइएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था..
बीबीसी, ४ असार । फेसबुकले अर्को वर्ष लिब्रा नाम दिइएको एउटा नयाँ डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सोसल मिडिया कम्पनीका अनुसार त्यस्तो मुद्रामार्फत् मानिसहरूले उसको आफ्नै एप्स तथा ह्वाट्सएपबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्नेछन्। कालान्तरमा हामीले मानिस र व्यवसायलाई थप सेवाहरू दिने अपेक्षा राखेका छौं। जस्तोस् एउटा बटन थिचेर बिल तिर्ने, कोडको स्क्यान गरेर कफी पिउने अथवा नोट नबोकिकनै सार्वजनिक..
काठमाडौं, ४ असार । नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणले अवैध मोबाइल आयातलाई रोक्ने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले मोबाइलविभिन्न भन्सार नाका हुँदै भित्रिने चोरी तथा अवैध मोबाइलको आयात पूर्णरुपमा रोक्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लाग गृहकार्य थालेको हो । मोबाइल फोनहरु अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान र संचालनको एक मलेसिय कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । प्राधिकरणले सबै भन्सारमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)..
काठमाडौं, ४ असार । बहुप्रतिक्षित मानिएको नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार गर्नका लागि अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत साइट तयार भएको छ । त्यस्तै, टेलिकमले आगामी ८ महिनाभित्र सबै साइटको काम सक्ने गरी तयारी थालेको पनि प्रष्ट पारेको छ । हालसम्म कुल ४ हजार १ सय ८६ साइटमा फोरजी विस्तारका लागी पूर्वाधार तथा अन्य प्रविधिक काम पुरा गरी एकै बर्षमा सातै प्रदेशमा सेवा दिने योजना..
असार ३, काठमाडौं । केवल टेलिभिजन महासंघले असार ९ गते दिउँसो १२ बजेदेखि असार १० गते १२ बजेसम्म बिज्ञापन प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरु बन्द हुने गराउने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तावित विज्ञपन ऐन २०७६ मा विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड हुनुपर्ने प्रावधान गरेको भन्दै सेवाप्रदायकले सरकारलाई सो समय प्रयोगात्मक रुपमा बन्द गराएर देखाउने बताएका छन् । यो व्यवस्था अब्यवहारिक भएको भन्दै सेवप्रदायक..
Results 781: You are at page 11 of 27